မြင့်မြတ်သည့် ဟဒီးစ်အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
အလိုရှိသည့် စာမျက်နှာ မြင့်မြတ်သည့် ဟဒီးစ်
မောင်လာအလီ (အ.စ) သည် မိမိ၏ ခေလာဖသ် အချိန် အခါ တွင် အဘယ်ကြောင့် ဖေဒက်ခြံ ကို ပြန်မယူခဲ့ပါသနည်း ?
ဖဖေျောဝါရီ ၄, ၂၀၁၉ - ၈:၄၁ ညနေ
မောင်လာအလီ (အ.စ) သည် မိမိ၏ ခေလာဖသ် အချိန် အခါ တွင် အဘယ်ကြောင့် ဖေဒက်ခြံ ကို ပြန်မယူခဲ့ပါသနည်း ? ဆိုတာကို လေးကို အောက်ပါအတိုင်းလေ့လာ ကြည့်ပါမည်။
ဇနျနဝါရီ ၃, ၂၀၁၉ - ၈:၂၁ ညနေ
အဲဟ်လေ့ဘိုက်သ် (အ.စ) ၏ ရွှေနှုတ်တော်လာ ဟဇရသ် ဖွာတွေမာ (စ.အ) ၏ ဂုဏ် အင်္ဂါတော်များ အကြောင်း ကို ABNA ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဒီဇငျဘာ ၁၀, ၂၀၁၈ - ၉:၁၂ ညနေ
အမီးရွလ်မိုအ်မေနီး မောင်လာ အလီ အလိုင်ဟစ်စလာမ် ဆိုတာ မည်သူ ဖြစ်ကြောင်း နှစ်ဘဝ ကျေးဇူး တော်ရှင် မဟာ တမန်တော်မြတ် ကြီး ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် ဆွလ္လာဟ်ဟို အလိုင်း ဟေဝ အာလေဟီ ဝစလာမ် ၏ဟဒီးစ်တော် အချို့ ကို လေ့လာ သုံးသက်ကြည့်ရန် အဗ်နာ စာဖတ် မိတ်ဆွေများကို ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါတယ်။
နိုဝငျဘာ ၂၆, ၂၀၁၈ - ၁၀:၃၇ ညနေ
အေမာမ်ရေဇာ (အ.စ) မိန့်တော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်၏ အမျိုးအနွယ်သားစဉ်မြေးဆက် ကို ကြည့်ခြင်းသည်အေဗါဒသ်ဖြစ်လေ၏။ မေးမြန်းလျှောက်ထားလေ၏။ ...
အေမာမ်ဇမာန်း (အ.ဂျ) သခင်၏ ဟဒီးစ်တော် ၁၇ ပါး
နိုဝငျဘာ ၅, ၂၀၁၈ - ၁၀:၀၂ ညနေ
အေမာမ်ဇမာန်း (အ.ဂျ) သခင်၏ ဟဒီးစ်တော် များ မှာ ၁၇ ပါး ကို ရှင်းလင်းချက် အတိုလေးများ နှင့်အတူ အဗ်နာ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ။
အောကျတိုဘာ ၅, ၂၀၁၈ - ၁၁:၂၅ ညနေ
(သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ ဂိုက်ဗသ် တွင်ကျွန်ုပ်ထံမှ အကျိုးအမြတ် ယူခြင်းသည် ဤကဲ့သို့ ဖြစ်လေ။မိုးတမ်များ၏ နောက်တွင် ကွယ်နေသည့် သူရိယနေမင်း ထံမှ အကျိုးအမြတ် ရယူရသကဲ့ သို့ဖြစ်လေ၏။ )
အောကျတိုဘာ ၅, ၂၀၁၈ - ၁၁:၂၂ ညနေ
( ဧကန်အမှန် အကြင်မည်သူမဆို မိမိ၏ သာသ နာညီ နောင်၏ ရပိုင်ခွင့်များ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ အမိန့်ကို ရိုသေလေးစားမည်၊ မိမိတာဝန်ဖြစ်သည့် ဥစ္စာ ပစ္စည်း ဆိုင်ရာ (ရှရီအီ) အခွန် ကို သက်ဆိုင်သူ၊ တိုက်တန်သူ ထံရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမည် ဆိုလျှင် ဤကဲ့သို့သော် ပုဂ္ဂိုလ် သည် လမ်းလွဲလမ်းမှား ဘက်သို့ ဆွဲခေါ်သွားမည့် ပြဿနာများ နှင့် အန္တရာယ်ရှိသည့် ဘေးဒုက္ခများမှ လုံခြုံသွား ပါ မည်။အကြင် မည်သူမဆို ကပ်စေးနည်းတွန့်တိုမည်၊ အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် ၎င်းကို အမာနသ် အဖြစ် ပေးသနားထားသည့် နေအ်မသ် တော်များ ကို တိုက်တန်သူ ကို မပေးမည်ဆိုလျှင် ဤကဲ့သို့သော် ပုဂ္ဂိုလ်များ သည် လောကီ၊လောကုတ္တရာ တွင် အရှုံး နှင့်ရင်ဆိုင်ရမည့် သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ )
စကျတငျဘာ ၂၇, ၂၀၁၈ - ၇:၅၇ ညနေ
( သို့သော် အသင်တို့၏ ဥစ္စာပစ္စည်းများ ကို အသင် တို့သန့်စင်သန့်ရှင်း သွားရန် အတွက်ကြောင့် သာ ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံ ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် အကြင်မည် သူမ ဆို သဘောတူလျှင်ပေးနိုင်မည် သဘောမတူလျှင် မပေး လည်း ရပါ သည်။အလ္လာဟ် ဟို အရှင်သခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချီးမြှင့် ပေးသနား ထားသည့်အရာများသည် အသင်တို့ကို ချီးမြှင့်ပေး နားထားသည့်အရာများထက် သာလွန် မြင့်မြတ် ပေသည်။ )
စကျတငျဘာ ၂၆, ၂၀၁၈ - ၇:၄၉ ညနေ
စကျတငျဘာ ၂၄, ၂၀၁၈ - ၂:၀၄ ညနေ
 إنّٰا غَیْرُ مُهْمِلِیْنَ لِمُرٰاعٰاتِكُمْ، وَ لاٰ نٰاسینَ لِذِكْرِكُمْ، وَ لَوْلاٰ ذٰلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ الَّلاٴْوٰاءُ وَاصْطَلَمَكُمُ الْاٴَعْدٰاءُ  စကားပြေအဓိပ္ပာယ်  ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အသင်တို့အား စိစစ်စစ်ဆေး ရာတွင်၊ အုပ်ထိန်း မှုပြုရာတွင် ပျက်ကွက်မှု ၊ဂရုမစိုက်မှု ကိုမပြုပါ။ အသင်တို့၏ သတိရတမ်းတမှု ကိုမည်သည့်အခါမှ မမေ့ပါ ၊အကယ်၍ ဤကဲ့သို့သာ မပြုခဲ့မည်ဆိုလျှင် အသင်တို့အပေါ် အခက် အခဲများ ၊ ဘေးဒုက္ခများကျရောက်လာပေမည်၊ ရန်သူ များ အသင်တို့ကို အမြစ်ပြတ်တိုက်ခိုက် မည်ဖြစ်ပေသည်။
ဇူလိုငျ ၉, ၂၀၁၈ - ၃:၃၀ ညနေ
အေမာမ်ဂျအ်ဖရ် ဆွာဒစ် (အ.စ) ဇိုက်ဗင်ရ်ှရှဟာမ်ကို ဘာမိန့်တော်မူခဲ့ပါသနည်း ?
ဒီဇငျဘာ ၁, ၂၀၁၇ - ၁၁:၄၉ ညနေ
အေမာမ်ဂျအ်ဖရ် ဆွာဒစ် (အ.စ) အနေဖြင့် ရှီအာ မိုအ်မင် တစ်ဦး ပြုလုပ်ရမည့်တာဝန် များ ကို ဇိုက်ဗင်ရ်ှရှဟာမ်ကို အောက်ပါအတိုင်းမိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်း ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အရေး အကြီးဆုံး အုပ်စု သုံးစု
နိုဝငျဘာ ၇, ၂၀၁၇ - ၇:၁၆ ညနေ
လူ့အဖွဲ့အစည်း ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အရေး အကြီးဆုံး အုပ်စု သုံးစု နှင့်ပတ်သက်ပြီး မောင်လာအလီ (အ.စ) သခင်၏ ဟဒီးစ်တော် တစ်ပါးကို အဗ်နာ ပရိတ်သတ် ကြီး အတွက် ပြောပြ လိုက်ပါတယ် ။
အောကျတိုဘာ ၁၁, ၂၀၁၇ - ၁၀:၀၄ ညနေ
မဟာတမန်တော်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) နှင့် ကိုယ်တော်၏ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) တို့၏ ဟဒီးစ်တော်များမှ အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ်အတွက် အဖိုးတန် ဟဒီးစ်တော် နှစ်ပါး ကို တင်ပြအပ်ပါတယ်။
မဟာတမန်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ အွန်မသ် ဝင် လူ ၃မျိုး ၃ စား
အောကျတိုဘာ ၁၀, ၂၀၁၇ - ၆:၂၆ ညနေ
မဟာတမန်တော်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) နှင့် ကိုယ်တော်၏ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) တို့၏ ဟဒီးစ်တော်များမှ အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ်အတွက် အဖိုးတန် ဟဒီးစ်တော် တစ်ပါး ကို တင်ပြအပ်ပါတယ်။
မဟာတမန်တော်မြတ် ကြီး (ဆွ) ၏ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ဆိုင်ရာ ဟဒီးစ်တော် ၅ ပါးကို ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် (၁) အမည် ဖြင့် အဗ်နာ ချ
ဩဂုတျ ၉, ၂၀၁၇ - ၁၀:၅၆ ညနေ
မဟာတမန်တော်မြတ် ကြီး (ဆွ) ၏ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ဆိုင်ရာ ဟဒီးစ်တော် ၅ ပါးကို ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် (၁) အမည် ဖြင့် အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက် တင်ပြလိုက် ပါ တယ်။
ဆဒ်ကာ နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဟဒီးစ်တော် ၆ ပါး
ဇူလိုငျ ၉, ၂၀၁၇ - ၁၁:၁၆ ညနေ
အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက် ဆဒ်ကာ နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဟဒီးစ်တော် ၆ ပါး ဆဒ်ကာ နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဟဒီးစ်တော် ၆ ပါးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အင်န်ရှာ အလ္လာဟ် အကျိုးအမြတ် ရယူနိုင်ကြမည် ဟု မျှော်လင့်မိပါတယ်။
အေမာမ် အလီနကီ (အလိုင်ဟေစ်စလာမ်) ၏ ဟဒီးစ်တော်အချို့
မတျ ၃၁, ၂၀၁၇ - ၁၀:၃၉ ညနေ
ရဂျဗ်လ ၃ ရက်နေ့ တွင် ကျရောက်လာသည့် အေမာမ် အလီနကီ (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) နှင့် ကိုယ်တော် ၏ အနွယ်တော်မွန်များ (အ.စ) ကို အချစ်ထားသူတိုင်း ကို ဝမ်းနည်း ကြောင်း ပြောကြားအပ်ပါတယ်။ သခင်ကြီး ၏ ဟဒီးစ်တော်များ နှင့်ပတ်သက်သည့် အချို့ ကို အဗ်နာ စာဖတ်ချစ်ပရိတ် သတ်ကြီး ကိုတင်ပြ အပ်ပါသည်။
ဆဲရေးတိုင်ထွာသူ .... မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ၏အမြင်တွင်
မတျ ၂၇, ၂၀၁၇ - ၁၁:၁၂ ညနေ
ဆဲရေးတိုင်ထွာသူ .... မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ၏အမြင်တွင်ဆိုသည် ခေါင်းစဉ်လေးကို ABNA ချစ်ပရိတ်သတ် ကြီးအတွက်ဖော်ပြ အပ်ပါတယ်။ အင်န်ရှာအလ္လာဟ် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံအခြေစိုက် မဒဲရ်စာယေ အလ်ကာအေမ် (အ.ဂျ) ၏ အဖိုးတန် ဟဒီးစ်တော်များ အိုလမာ အဆိုအမိန့်များ ကို ဖော်ပြသွားပါမယ်။
အဘယ်ကြောင့် သားသမီးများကို သွန်သင်ဆုံးမပဲတင်ဖို့ အရေးကြီးပါသနည်း …?
ဇနျနဝါရီ ၉, ၂၀၁၇ - ၈:၄၉ နံနကျ
အဘယ်ကြောင့် သားသမီးများကို သွန်သင်ဆုံးမပဲတင်ဖို့ အရေးကြီးပါသနည်း …? ဆိုသည်အချက်များ ကို အောက် ပါအတိုင်းလေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ်) (အ.စ) သည် အမှန်တရား(ခ) ဟက်ခ်၏ အဓိက ဗဟိုအချက်အချာ ဖြစ် လေ၏။
ဇနျနဝါရီ ၇, ၂၀၁၇ - ၁၁:၅၉ ညနေ
အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ်) (အ.စ) သည် အမှန်တရား(ခ) ဟက်ခ်၏ အဓိက ဗဟိုအချက်အချာ ဖြစ် လေ၏။ اَلْحَقُ مَعَنٰا قَلَنْ يُوْحِشَنٰا مَنْ قَعَدَ عَنّٰا، وَنَحْنُ صَنٰا ئِعُ رَبِّنٰا، وَالْخَلْقُ بَعَدُ صَنٰا ئِعُنٰا စကားပြေအဓိပ္ပာယ်ဟက်ခ်(ခ)အမှန်တရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ အဟ်လေ့ဘိုက်(သ်)(အ.စ)နှင့်အတူ ရှိလေသည်။အချို့သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဝေးကွာကြလေရာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လုံးဝကြောက်စရာ၊ လန့်စရာ အကြောင်းမဖြစ်ပေ။ အကြောင်းမှာ- ကျွန်ုပ်တို့သည်မြတ်အလ္လာဟ်၏ ကျောင်းတော်ဆင်းများ ဖြစ်ကြပြီး အခြားအဖန်ဆင်းခံများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျောင်း တော်ဆင်းများ ဖြစ်လေသည်။
ကိုယ်တော်မြတ် ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) အဖိုးတန် ဟဒီးစ်တော် ၁၁ ပါး
ဇနျနဝါရီ ၆, ၂၀၁၇ - ၁၁:၁၇ ညနေ
ကိုယ်တော်မြတ် ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) အဖိုးတန် ဟဒီးစ်တော် ၁၁ ပါး အား ချစ်ခင် လေးစား ရသည့် အဗ်နာ ပရိတ်သတ်များ အတွက် ဖော်ပြ အပ်ပါသည်။
နမာမ် မဖတ်မီ ၊ အလ္လာဟ် ရှိုက်ရ် မလုပ်မီ ၊ သက္က်ဝါတရား လက်မကိုင်မီ မှတ်ရမည့် ဟဒီးစ်တော် တစ်ပါး
နိုဝငျဘာ ၁၉, ၂၀၁၆ - ၁၁:၂၀ ညနေ
နမာမ် မဖတ်မီ ၊ အလ္လာဟ် ရှိုက်ရ် မလုပ်မီ ၊ သက္က်ဝါတရား လက်မကိုင်မီ ဤ အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ ) ၏ ဤ ဟဒီးစ်တော်လေးကို အသေအချာလေ့လာရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
လောကီ နှင့် လောကုတ္တရာ အတွက် စစ်မှန်သည့် အစီအစဉ် / အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ)
နိုဝငျဘာ ၁၇, ၂၀၁၆ - ၁၁:၅၄ ညနေ
လောကီ နှင့် လောကုတ္တရာ အတွက် စစ်မှန်သည့် အစီအစဉ် နှင့်ပတ်သက်ပြီး အေမာမ်ရေဇာ (အ.စ) မှ အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူထားပါတယ်။
အီးဒ် ဒေ ဂဒီးရ် နေ့ တွင် ဟဂ်ျ အကြိမ် ၁သိန်း အုမရဟ်အကြိမ် ၁သိန်း ပြုသည့် စဝါးဗ် ရမည့် အလုပ်
စကျတငျဘာ ၂၀, ၂၀၁၆ - ၁၂:၂၁ ညနေ
အီးဒ် ဒေ ဂဒီးရ် နေ့ တွင် ဟဂ်ျ အကြိမ် ၁သိန်း အုမရဟ်အကြိမ် ၁သိန်း စဝါးဗ် ရမည့် အလုပ် နှင့် ဂဒီးရ်နေ့ ထားသည့် ရိုဇာ စဝါးဗ် ကို လေးစား ရသည့် အဗ်နာ ပရိတ်သတ်ကြီးများ အတွက် ရေးသာတင်ပြ လိုက်ပါတယ်။
အေမာမ် မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် (အလိုင်းဟေစ်္စလာမ် ) သခင်ကြီး၏ သြဝါဒ ဟဒီးစ်တော်များ အချို့
စကျတငျဘာ ၉, ၂၀၁၆ - ၃:၅၁ ညနေ
ယနေ့ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတ နိုင်ငံ တော် တွင် ဇိလ်ဟဂ်ျလ (၇) ရက် နေ့ အေမာမ် မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် (အလိုင်းဟေစ်္စလာမ် ) သခင်ကြီး၏ ရှဟာဒသ်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ထိုအတွက်ကြောင့် အေမာမ် မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် (အလိုင်းဟေစ်္စလာမ် ) သခင်ကြီး၏ သြဝါဒ ဟဒီးစ်တော်များအချို့ ကို လက်တွေ့ လိုက်နာ ကျင့်သုံး နိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
ဆောင်ရန် ၃ချက် နှင့် ရှောင်ရန် ၃ချက် / အေမာမ်ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ် (အ.စ)
ဩဂုတျ ၄, ၂၀၁၆ - ၁၁:၃၀ ညနေ
အဗ်နာ ပရိတ်သတ် အတွက် အဖိုးတန် ဆောင်ရန် ၃ချက် နှင့် ရှောင်ရန် ၃ ချက် ကို တင်ပြအပ်ပါတယ်။ ဤ ဆောင်ရန် ၃ချက် နှင့် ရှောင်ရန် ၃ချက် ကို ရှီအာမွတ်စလင်မ် များ၏ ခြောက်ပါးမြောက် အေမာမ်၊ အေမာမ်ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ် (အလိုင်ဟေစ်စလာမ်) မှ မိန့်တော်မူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုရ်အာန် နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)
ဇူလိုငျ ၃၀, ၂၀၁၆ - ၂:၀၃ ညနေ
ကုရ်အာန် နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ကျနော်တို့ လွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် တစ်ခုတည်းသော် လမ်း ဖြစ်ပါတယ်။